Barcelona Oo Mid Ka Mid Ah Halyeeyadii U Magacaabaysa Tababaraha Shaqada Ka Beddelaya Ernesto Valverde – Latest Sports News
Barcelona Oo Mid Ka Mid Ah Halyeeyadii U Magacaabaysa Tababaraha Shaqada Ka Beddelaya Ernesto Valverde
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la sheegay inay tababare ka dhiganayso mid ka mid ah xiddigaheedii taariikhda weyn u horseeday.
Barcelona oo dhawaan qandaraas cusub uu u saxeexay tababare Valverde ayaa la sheegay inay diyaarinayso halyeygeedii hore ee Xavi Hernandez si uu u noqdo tababaraha shaqada kala wareegaya Ernesto Valverde.
Xavi oo waqtigii uu joogay Barcelona ahaa halyeyga khadka dhexe ee u curiyey guulaha xidhiidhka ah ee ay dib u bilowday kaddib sannado ay Real Madrid iyo kooxaha kale kaga horreeyeen horyaalka iyo tartamada kale, ayaa waxa uu hadda ka ciyaaraa waddanak Qatar.
Sida uu qoray wargeyska Don Balon ee kasoo baxa dalka Spain, maamulka Barcelona ayaa doonaya in Xavi uu noqdo tababarahooda xiga Valverde ee la wareegi doona hoggaaminta kooxda mustaqbalka dhow, waxaanay ku kalsoon yihiin aqoonta uu u leeyahay aqoonta uu u leeyahay kooxda, qaab-ciyaareedkeeda iyo waxyaabaha ku xeeran ee sida naadiyada ay cadowga yihiin.
Wargeysku waxa uu intaa ku daray in maamulku ay ogyihiin in Valverde aanu weligii la joogi doonin, ayna tahay inay haddaba sii diyaarsadaan ninka ugu habboon ee shaqada ka beddeli doona.
Barcelona oo sannadkii 2017 magacowday Valverde ayaa waxa uu ka caawiyey in xili ciyaareedkii hore ay ku guuleystaan LaLiga iyo sidoo kale Copa del Rey oo ay haddana finalka joogan, waxaana horyaalka ay u muuqdaan inay ku ceshan doonaan iyagoo toddoba dhibcood ka horreeya Atletico Madrid oo kaalinta labaad ku jirta, halka Real Madrid na ay 12 dhibcood ka sarreeyaan.
Inkasta oo koobabka maxalliga ah ay u muuqato Barcelona inay ku guuleysan doonto, haddana ahmiyadda ugu weyn ee kooxda reer Catalonia ee xili ciyaareedkan ayaa ah tartanka Champions League, waxaana laga yaabaa inuu hoggaankeeda isbeddel ku yimaaddo haddii ay hammigaas ku guul-darraysato.